Iincwadi zokudlala eziDijithali kunye neXesha elitsha lokuThengisa | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 9, 2015 NgoLwesibini, Juni 9, 2015 UChristopher Faust
Kwimeko yokuthengisa yanamhlanje, imiceli mngeni emininzi inokuthintela iinkokheli zentengiso ekuncedeni amaqela abo ukuba afezekise iinjongo zabo. Ukusuka kwintengiso entsha ecothayo yokuhambisa ixesha kwiinkqubo ezingadityaniswanga, ukuthengisa kwakhona kuchitha ixesha elininzi kwimisebenzi yezolawulo kunye nexesha elincinci lokuthengisa.
Ukukhawulezisa ukukhula, ukunciphisa ukungasebenzi kakuhle ngaphakathi kumbutho kunye nokunciphisa ingeniso kwintengiso, iinkokheli zentengiso kufuneka zisekele iinkqubo ezi-agile kwaye ezinokuziqhelanisa.
Iincwadi zokudlala zedijithali ziyinxalenye ebalulekileyo yezicwangciso ezintsha zokuthengisa kwaye zisebenza njengesixhobo esibaluleke kakhulu kumaqela okuthengisa, sinikezela ngesakhelo esiguqukayo esikhokela abathengisi ngobukrelekrele kweyona misebenzi mihle kunye nokwenza ukuba iinkqubo ziphindaphindwe kuwo wonke umbutho.
Ngokusebenzisa i- Incwadi yokuthengisa edijithali Isisombululo, iinkokheli zentengiso zinokuthatha ithuba lokuqonda okunzulu ngexesha langempela-ukuqinisekisa ngokukhawuleza ukulungelelanisa iimfuno zomthengi kunye nendlela eziqhubekeka ngayo izinto. Amaqela akwazuza ngokubonakala okongeziweyo kwinto esebenzayo nakwinto engafanele ukulungisa iingxaki ngaphambi kokuba zibe nefuthe elibi kwintengiso.
Ngaphandle kwento yokuba siphila kwihlabathi ledijithali, amanye amaqela okuthengisa asasebenzisa i-static PDF okanye iincwadi zokudlala ezisekwe ephepheni. Ngelixa le mibutho isendleleni elungileyo yokuhlengahlengisa inkqubo yabo yokuthengisa, iincwadi zokudlala ezisekwe ephepheni azinawo amandla kunye namandla anamandla afunekayo okwenza unxibelelwano olunzulu kunye nabathengi kule mihla nakweli xesha.
Ukujonga okutsha Incwadi yokuthengisa edijithali Itekhnoloji, kunye nokuguqula iphepha-ngokusekwe kwiphepha okanye iincwadi zokudlala zePDF kwisisombululo sokuthengisa esikhokelwayo, kwaye ke ngokwenza ubuwena kumava omthengi, kunokuphucula iqhinga lokuthengisa lombutho kunye nokudala kubaluleke ngakumbi kwaye kwimeko iincoko zomthengi, ngelixa uhambisa umxholo olungileyo ngokuchanekileyo xa kufuneka njalo. Kwimeko yeshishini yanamhlanje, amaqela okuthengisa kufuneka abe nokufikelela kwimfuno yokunxibelelana ngokufanelekileyo namathemba. Ukuhlala ngaphambi kokutshintsha kweemfuno kunye neemfuno yeyona ndlela yokuvala isivumelwano.
Nazi iindlela ezintlanu ezilungileyo xa usasaza iiNcwadi zokuThengisa eziDijithali
Cinga ngamaqela ahlukeneyo asebenzisa iiNcwadi zokuThengisa -Gcina engqondweni, iiNcwadi zokuThengisa azithengiseli amaqela okuthengisa angaphandle. Iincwadi zokudlala ezinamandla nezenzelwe wena zinokuqinisekisa ukuba onke amaqela, ukusuka kulawulo ukuya kwintengiso, anolwazi olufanelekileyo ngexesha elifanelekileyo lokuhambisa intengiso kunye nokugcina inkqubo isemgceni.
Imisebenzi yokuhamba yesiqhelo kunye neetemplate kunye nokuhamba komsebenzi - Ixesha yimali yentengiso. Ukusasaza imisebenzi yokuchitha ixesha kunye nokulandela inkqubo emiselweyo kuphucula imveliso kunye nokusebenza kakuhle. Oku kwenza ukuba abathengisi baphinde bachithe ixesha elininzi bethengisa kunye nexesha elincinci lokukhangela.
Imithombo yeendaba engaphezulu komxholo -Ii-PDF kunye namakhonkco ayisiyiyo kuphela indlela yokusebenzisa umxholo. Kwimeko yanamhlanje yemithombo yeendaba, ii-PowerPoint izilayidi, iividiyo, amanqaku, iiposti zebhlog, kunye nezinto zoyilo zenza ukuba ukuthengisa kuphindaphinde ukubonisa umxholo owenzelwe wena nangakumbi ngamandla. Sebenzisa ubuninzi bomxholo okhoyo kwaye wenze ngokwezifiso into oyisebenzisayo ngokusekwe kwimeko nganye yokuthengisa.
Ukubonelela ngesikhokelo sexesha-lokwenene kunye neengcebiso zokuqeqesha -Ukunika ukuthengisa ukubuyela kwakhona kulwazi lwexesha lokwenyani kwisivumelwano sentengiselwano kubanika ukuqonda okusebenzayo ngelixa besakha ukuzithemba kwaye ubalungiselela ngcono ukuphumelela. Isitshixo kukungabongamazi ngalo lonke ulwazi olukhoyo. Endaweni yoko, jolisa ekuqiniseni ezona ndlela zibalaseleyo kunye nokubonelela ngedatha kuphela abayifunayo kwimeko yesivumelwano esikhoyo.
Qalisa ukudlala ngezenzi ezenziwayo (umzekelo, ukuziphatha, bonelela) - Imisebenzi yokuthengisa ihlala idida, inde kwaye yahlulelene. Ukukhokela ukuthengisa ngokukhawuleza kunye nangokuthe ngqo ukwenziwa ngendlela yamanyathelo anokusetyenziswa kunceda ukwenza lula inkqubo yokuthengisa, ngelixa ulungelelwaniso oluchanekileyo nohambo lomthengi.
tags: isisombululo sencwadi yokudlala yedijithaliintengiso yedijithaliincwadi yokudlala yedijithaliiincwadi zokudlala zedijithaliIxesha lokuthengisaqvidiiinkokheli zentengisoixesha lokuthengisaamacebo okuthengisa
UChristopher unoxanduva lwentengiso yehlabathi, uphuhliso lweshishini, kunye neendlela zokuthengisa kwintengiso Qvidian. Njengomlawuli ophumeleleyo wentengiso kwihlabathi liphela onobuchule besizinda esinzulu kwicandelo lobuchwepheshe, uChristopher uzisa ingxelo eqinisekisiweyo kunye neenkampani zokukhula okuphezulu.